ओखर फुटाउन र खसी भुत्ल्याउन पनि अध्यादेश ! अध्यादेशले सिध्यादेश ! – News Of Nepal
यति भएपछि संविधान, नियम, कानुन पनि चाहिँदैन । भएर पनि नभएजस्तो नियम कानुन हुनुभन्दा त हुँदै नभएको राम्रो । प्रधानमन्त्री, मन्त्री र नेताहरु पनि चाहिँदैन । सबै कुरा अध्यादेशबाट हुन्छ । यतै अध्यादेश, उतै अध्यादेश ! नाम अध्यादेश भाषा गद्यादेश । हुँदा हुँदा अब अध्यादेशले नै सिध्यादेश! उज्यालोनअनलाइनबाट साभार